Indlela yokwenza ukuqhakaza kwe-punching? Izimbali zasekhaya: ukunakekela, okuqukethwe
Manje ezitolo zezimbali ukukhetha okunjalo kwezitshalo zokuhlobisa, kufaka phakathi okungajwayelekile, kuvela emazweni ashisayo, okungahle kulahleke. Kodwa ukuthenga imbali yamavini kuseyingxenye yempi, ngifuna ukwandisa impilo yakhe isikhathi eside ngangokunokwenzeka emva kokuthenga. Futhi ngoba lolu lwazi luyadingeka: mayelana nokunakekelwa, ukufakelwa kabusha, izici kanye nezidingo zesitshalo. Ngenhlanhla, ayikho inkinga ngalokhu okwamanje.
Ulwazi oluyisisekelo mayelana nokushaya
I-Poinsetia iyinhlangano yezitshalo zokuhlobisa eziseMexico naseMelika Ephakathi. Ngokuvamile, ezimweni zendalo zemvelo lokhu kuyisihlahla esihlala njalo esihlahleni esivela emndenini we-euphorbia kuze kufike ku-3 m phezulu. Ezindaweni eziphakathi, ikhule ekhaya, ezikhungweni. I-Poinsetia ekhaya ayivami ukukhula ngaphezu kwe-50 cm. Lesi sitshalo sinamanye amagama, njenge: euphorbia, spur, amahle kakhulu noma amahle, uKhisimusi noma i- Bethlehem star. Emazweni aseYurophu naseMelika, le mbali ibhekwa njengenye yezimpawu zikaKhisimusi: iyasetshenziselwa kabanzi ukuhlobisa amatafula emikhosi, amasonto, amahholo ezitolo zokuthenga. Kusukela ezimbizeni ezinezimpondo eziqhakazayo zakha imipiramidi ehlaba umxhwele, kudingekile ukuthi lesi siphepho senzeke emalungiselelweni ahlukahlukene ehlobisa izimbali kanye nemikhosi yeKhisimusi.
Igama elinjalo elihlabayo kanye nesicelo esithile saleso sitshalo sitholiwe ngenxa yombono wayo okhangayo phakathi nezimbali. Cha, izimbali zakhe zilula, ezincane, eziluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa umbala oqhakazile wamaqabunga azungezile, ohloswe ukuheha izinambuzane zokuvuthwa - kungaphezu kokudumisa. Lawa maqabunga abizwa ngokuthi ama-bracts, atholakala ezungeze ama-inflorescences ngendlela yenkanyezi, futhi lesi sitshalo esingavamile siqhakaza ngeKhisimusi yamaKatolika-ngakho-ke igama layo. I-Poinsetia (isithombe esingezansi) - lesi sitshalo siyabonga futhi siyabonga ngezinkanyezi zayo eziqhakazile ngokumelene nesizinda samagqabi asohlangene ombala ombala obumnyama obumnyama.
Kunezinhlobo ezimbalwa ezihlukahlukene ze-poinsetia. Ngenxa yemizamo yabalimi, izinhlobo eziningi ze-hues ezicatshangwayo ziboniswa: ezimhlophe, ukhilimu, i-lemon, wonke amathoni obomvu nokubomvu, i-orange, eluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhona futhi ama-bicolour bracts - anezinyosi kanye nama-patches, ane-"spraying" encane. Kunezinhlobo ezinamalungiselelo angavamile we-bracts, okwenza umphumela ophindwe kabili. Uma i-poinsetia enesithakazelo, isithombe sezinhlobonhlobo zezinhlobo kulula ukuthola ezincwadini zokubhekisela. Kodwa-ke, ukwenza ukhetho phakathi kwamamaki - umsebenzi awulula, le mbali inhle kakhulu futhi ayinhle.
Kuyacaca ukuthi abachwepheshe kanye nabathandi bezitshalo zasendlini abaye bathola le mbali, ngokuqinisekile bayokwazi ukwazi ukwenza izimpande zePonce ngoKhisimusi. Futhi njengoba lesi sitshalo siphonswa ngemuva kokuqhakaza, njengoba ngezinye izikhathi entshonalanga, abacwaningi baseRussia cishe abafuni ukufuna, olunye ulwazi ngeke lube lukhulu: mayelana nokunakekelwa, ukukhiqiza, ukuchelela, ukufakelwa kabusha. Ake siqale.
Ukuthola i-punch esitolo, kufanele kucatshangelwe ukuthi ayithandi izinguquko ezinkulu zokushisa. Lesi sitshalo sishisayo, izinga lokushisa elingaphansi kuka-12 ° C liyabulala. Ngakho into yokuqala okufanele uyenze iqaphele ukuthi imbali ayonakele ngesikhathi sokuhamba ekhaya. Ekhaya imbali kufanele ifakwe endaweni ethile. Kungukuthi ulwazi oluwusizo lokuthi nakuba ethanda ukukhanyisa okukhanyayo, kodwa kufanele kuhlakazeke, ngakho-ke kusukela elangeni eliqondile kungcono ukulivikela, okungenani ngokusebenzisa amakhethini. Imidwebo ye-pianism iyaphikisana, kulokhu kuyinhloko.
Ngokuqondene nokuchelela, ehlobo kudinga amanzi amaningi, kanti ama-sprinkle ajwayelekile, imbali ithanda umswakama. Ekwindla nangobusika, ungakwazi ukuphuza isitshalo kancane, futhi ngesikhathi sokuphumula emva kokuchichima - ngisho nangaphansi. Ngokushisa okukhulu okushisa, amaqabunga e-punch angahle aphuzi futhi awe, futhi lokhu, futhi, kufanele kukhunjulwe. Ngeke azizwe ekhululekile futhi emazingeni okushisa aphezulu egumbini - engaphezu kwama-25 ° C.
Uma umnini wesitshalo ngesikhathi sokukhathazeka ngokuthi ungenza kanjani ukuvuna i-punchset ngasekupheleni kukaDisemba, ukuze yena, kanye neziqhingi zeKhisimusi, akhonze njengomhlobiso wendlu, ngokuqinisekile uzosebenza, njengoba kuneziqondiso eziqondile zalokho. Iqiniso liwukuthi ngaphansi kwezimo zemvelo i-punch ilungele ukukhazimula ngokukhanya okufushane kanye nobusuku obude. Ngakho-ke, kuyadingeka ukulinganisa lezi zimo ngokuvumelana nayo. Ekupheleni kukaSeptemba, ngesikhathi sokuhlwa, kubalulekile ukuvikela lesi sitshalo ngokukhanyisa okufakelwayo, ukumboza nge-polyethylene emnyama, amandla athile opaque noma ukuthuthela endaweni emnyama. Ngqikithi, kungakapheli usuku imbali kufanele ivele ingakapheli amahora angu-12 noma ngaphezulu.
Umbuso onjalo, eduze nemibandela yangempela yokuthuthukiswa kwezitshalo, ufakazela ukuthi i-punchet yokuqala ifomula izimbali zezimbali, bese ikhiqiza ama-bracts aqhakazile. Ubumnyama kufanele buphelele ngangokunokwenzeka, ngaphandle kwalokho ama-bracts angeke abe nemibala efanayo, futhi amabala azovela kubo. Amaviki ayisishiyagalombili alokhu okuqukethwe akwanele ukwenza isitshalo sikhuphuke ngamaholide omnyaka omusha, futhi ungaya ezintweni ezijwayelekile zesitshalo.
Ngokuvamile, lokhu kuhlangenwe nakho okuthakazelisayo kulabo abathanda izitshalo zokuhlobisa ekhaya: hhayi kuphela ukunikeza imbali ngokunakekelwa okufanele, kodwa nokuthi ukwazi ukwenza kanjani ukuhluma kubonakale kahle lapho ufuna umnikazi.
I-Punch punch iyajabula ngezinkanyezi zayo eziqhakazile eziqhakazile zamasosha onke kusukela ngoJanuwari noFebhuwari. Khona-ke udinga ukuthula. Lapho ama-bracts emile, amaqabunga aphansi aqala ukuwa ngokwemvelo, zonke iziqu kufanele ziqedwe, zishiye ingxenye yesithathu kuphela ehlathini ebhodweni, futhi zisuse endaweni emnyama. Amanzi kufanele abe khona ukuze umhlaba ungabe usomile - okungukuthi, okungajwayelekile. Ngo-Ephreli, igumbi lokuphumula eliqabulayo lilungele inkathi entsha. Ufakwa efasiteleni elithambile kakhulu elifudumele futhi elifudumele, elinde ukubukeka kwamahlumela amasha nokuphuza amanzi alula kancane afudumele.
Ngentwasahlobo, ngemuva kokuba kuvele amaqabunga amasha, isitshalo singasetshenziselwa ukungena embizeni kancane kancane, ngemuva kokuhlela amanzi amancane nokukhetha inhlabathi evulekile. Ungayinakekela kanjani i-punch emva kokufakelwa? Nikeza ngamanzi amaningi okuchelela nokupuniza, ukusika izihlumela ze-branching nokwenza isihlahla somumo oyifunayo. Izinsuku emva kuka-10-12 emva kokufakelwa, isitshalo kufanele sikhuliswe ngomanyolo wamaminerali, futhi njalo ngemva kwamasonto amabili kudingekile ukwengeza ukudla kuze kube sekwindla. Sisazi ukuthi singenza kanjani ukuqhuma kwe-punch yeKhisimusi elandelayo.
Uma inkondlo iyakuthanda kakhulu, ukukhiqizwa kwayo kuyiqiniso ngempela. Lokhu kwenziwa nge-cuttings. Ngokujwayelekile ehlathini uhamba okungenani amahlumela amathathu aqinile, kanti amanye kudingeka adutswe. Lapha bangakwazi ukusika ama-cuttings ngamaqabunga angu-4-5. Ngendlela, lapho usebenzelana nokukhwabanisa izihlahla, kufanele ukhunjulwe ukuthi ijusi lakhe, njengawo onke ama-milkweed, lingabangela ukucasula isikhumba. Ngakho-ke, kungcono ukugqoka amagilavu. Le juice enomsoco kufanele ihlanzwe ngamanzi afudumele kusuka kumathanga aze aqede ukuma. Emva kwalokhu, ama-cuttings asekelwe emanzini noma ngokushesha enhlabathini evulekile. Kungcono ukuhlela kubo ukushisa okubamba ukushisa, okumbozwa ngesitsha sokubala, ukufafaza nokufafaza nsuku zonke. Ngenyanga ngokuvamile kuvame ukutshala izitshalo ezinamanzi, kodwa akunakwenzeka ukuthi zizoqhakaza ngonyaka ofanayo, kuthatha isikhathi sokuba izinhlanzi ezincane zikhule.
Kukhona ukwaziswa ukuthi i-punket yayaziwa kuma-Aztec, owasebenzisa ijusi layo ngezinhloso zokwelapha. Kusukela emaqabeni akhe, baphinde bathatha idayi yendwangu. Kunezimpikiswano eziningana ezixhunywe ne-punch, okuyinhloko yokuthi lo mntwana wanikezwa ngothando kumntwana kaKristu ngothando, futhi kuphela lapho kwavela khona ngokungazelelwe imibala ekhanyayo.
EYurophu, lesi sitshalo sasingeniswa eMelika ngabantu abahamba ngekhulu le-XIX, futhi lapho saziwa khona ngenxa yobungqayizivele bayo ukuqhakaza ebusika, ebanda kakhulu. Igama lembali lalinikwa ngokuhlonipha isithunywa saseMelika eMexico, JR Poinsett. Yena, ngaphandle kwezombangazwe, naye wayelomlutha wezitshalo, wahamba kakhulu futhi wasesha futhi waqoqa izitshalo ezingavamile.
ULily wensimu yesigodi: ukutshala, ukunakekelwa, isithombe
Fish - ukudla okunempilo kakhulu
Ayikho ukucindezeleka nophuzo oludakayo - glycine, ifomula isizukulwane esisha.
Umnyango wezomthetho: isakhiwo, imisebenzi kanye nezikhundla
Impendulo ecacile yalo mbuzo othi: "Indlela ngasekupheleni ungenza ukulungiswa?"
Intela Land noma intela ekukhokheleni umhlaba
Indlela ugeza ibhantshi phansi ukuthi awuzange elahlekile fluff? Indlela ugeza ibhukwana phansi jacket
Ukufakwa ukupholisa air conditioning system